जलेको ह्रदयमा फुलेको प्रेम
लेखक-हस्त गौतम मृदुल
आदरणीय मित्र गिताजी
यहाँलाइ मेरो नमस्कार। तपाइको परम कूसलतालाइ म आफनो कूसलतालाइ ठान्दछु। तपाइलाइ पहिलो पल्ट पृथ्वीको पल्लो कुनाबाट यो पत्र लेख्दै छू। मलाइ थाहा छ अब तपाइले यो पत्र हेर्ने चासो गर्नु हुने छैन। किनकी तपाइको म प्रतिको चासोमा कमी आइ सकेको छ। मेरा जीवनका यी अक्षेरहरु निकै गरिव भैसकेका छन। यो पूंजीबादी समयमा यस्ता दरिद्र अक्षेरको केही अर्थ छैन। यि निरही र अभागी अक्षेर पढ्ने तपाइका कोमल नयनहरुमा परिवर्तनको मुलक आइसक्यो। तपाइका नजर खानदानी अक्षेरतिर आर्कषित भैसके। मात्र आजसम्म मेरो उत्सर्ग प्रेम र बिर्सन नसकिने बिगतका ति दिब्य यादहरुले गर्दा अन्तिम पत्र लेख्न बिवस छु। यसलाइ अन्यथा नलिनु होला।
स्वर्गहरुमा पनि स्वर्ग जस्तो आफनो सुन्दर मात्रीभूमिलाइ चटक्कै छोडेर यो बिरानो दुनियाँमा रुमली रहेको छु। यो बिरानो ठाउमा यादहरु नै सहयात्री बन्दारहेछन। सात समुन्द्र तरेर सबैलाइ माया मारेर एक्लै तड्पेर बस्दाका दिनहरुमा तिनै सुन्दर अतितहरुले बिगतलाइ कोट्याइ रहन्छन। मुटु दुखाइ रहन्छन।
सिस्ने हिमालको अनुपम सौन्दर्य र सौम्य मुस्कानको न्यानो आभाषबाट टाढा भएको पनि तिन दशक भैसकेछ। बाउन्न पोखरी त्रिपन्न ताल भनेर चिनिने मेरो प्यारो रुकुम छोडेको पनी धेरै भैसके छ। समयको गर्भभित्र जिवित ति हाम्रा यादहरुले बेला बेलामा स्मृतिको कोखमा जन्म लिंदा मन प्रशव पिंजडामा छटपटिन्छ। हामिले काठमान्डौमा भेटेको पनि एक दशक बितीसकेछ। समयको गतिले कहाँबाट कहाँ हुत्याइ दिन्छ कुनै सिमा छैन। आज तपाइ कहाँ कस्तो परिवेशमा पुग्नु भो र म कहाँ कस्तो परिवेशमा फसें। यो नै भाग्यले न छोएको समयको खेल हो।
त्यतिखेर तपाइका चन्चल आँखाले आखा मनले मनलाइ र बदनले बदनलाइ अपनाइ सकेका थिए। हामीले संगै स्वयम्भुमा बालेको आपसी प्रेम र सद्धभावको दियो अझै बल्दै होला तर सम्बन्धको लक्षमण रेखा नाघेर कुनै रावणको पछि गैसक्नु भएछ। दिल्लीको लोटस टेम्पल जस्तै मायाँको फुल ह्रदयमा फुल्न थालीसकेको थियो। मैले त्यो फुल साँच्चै यर्थाथको दृष्ट्रिकोणबाट सुन्दर र अमर छ भन्ने ठानेको थिएँ। म दंग थिएं। कछुवाले बालुवा भित्र छोपिएका आफना फुललाइ बाहिरबाट स्मरणशक्तिले कोरल्द छ त्यहि हिसाव मैले पनि हाम्रा सपनाहरुलाइ कोरल्दै गएँ।
आज कात्रिक १६ गते २०५० साल नेपाल छोडेर जीवनको एक लामो यात्रामा जुटि रहेको छु। यतिखेर मेरो मनभरी तपाइकै अनुपम प्रेम साथमा लिएर त्यो गन्तब्यहिन यात्रामा लाग्दै छु। जहाजमा बसेर तपाइकै अनगिन्ती स्मृतिहरु केलाउदै नागोया एरपोर्टमा उत्रिदै छु। जापान मेरो कल्पनाको देश थियो। एशियन हेल्थ इन्स्टीचुट को निमन्त्रणमा नागोया पुगेर झण्डै एक हप्ता बिताएँ। आहा कति आत्मीकि जापानीहरु। कस्तो सद्धभाव पाहुनाहरु प्रति कस्तो मेहेनत। नागोयाको टोयटा सिटीमा केही क्षेणको आनन्दमया त्यो बातावरणमा तपाइलाइलाइ सम्झीं रहें। सुन्दर ठाउमा सुन्दर मनहरु एक हुदाको अबस्था कस्तो हुदो हो भन्दै मन्को लड्डू घिउसंग खाइरहें। हारामाचिदा सहरको फुलै फुलले सजिएको त्यो शहरमा तपाइलाइ सम्झें। अनी त्यो बेला ति फुलहरु टिपेर मायाको निसानी दिने कल्पनामा एटलान्टीक महासागर बिचमा सुर्य डुबेको देखिए झै भावमा डुबी रहें। नागानो कति सुन्दर ठाउ रहेछ। भगवान बुद्धको बिशाल काठैकाठले बनेको मन्दिरको दर्शण गर्दा बहुतै सम्झें। मन्दिरमा दुइ जनाले संगै बसेर ध्यान गरेको एक्लो हुदा खल्लो लाग्यो। वोलम्पीक शहर बनेको त्यो नागानोको आतित्थ उच्चस्तरको थियो। आफुलाइ सगरमाथा ठान्दै माउन्ट फुजीलाइ अंकमाल गर्न पुगेको भान भो। त्यो हिउँ थिएन प्रेमको भावुक आभाष थियो। मैले फुजीलाइ तपाइकै अनुभुतिमा धेरै पटक चुमें। त्यसैको वरीपरी घुमे। टोकियो सहरको आगनमा फुलेका चेरीका "फुलहरुले मेरो मनलाइ छोइरहयो। पिरतिले मैलिएको मुटुलाइ पलपल धोइरहयो।"
यही गीत गुनगुनाउदै अनि फेरी ओसाका वकिनावा तिर लागें। एक्लो यात्रामा केवल बिगतका ति यादहरुमा रुमल्लिएको छु। करिव ३ महिनाको जापान यात्रामा मायाको अनुभुति अबिछिन्न भैरहयो मलाइ। अनी म फेरी काठमान्डौ फर्किए र त्यही बाहुपासमा बाँधिएं। हाम्रो बिस्वास फल्दै फुल्दै गै रहेकै थियो। बेला बेला भुकम्पका धक्काहरु महसुस गर्दा लाग्थ्यो मेरो पवित्र प्रेममा कहिलै धक्का नलागोस भनेर।
फागुण २१ गते २०५० सालमा फेरी दोस्रो यात्रा नर्वेको ओस्लोमा तय गरिरहेको छु। एरपोर्टबाट भर्खरै ओर्लिदै होटल तिर लागें। हिउँ नै हिउको सेतो खास्टो ओडेको नर्वे एक परम सुन्दरी गोरी झै लाग्यो। हिमालै हिमायलयको देश नेपालबाट आए पनि हिउँ आफनै हातले स्पर्श गरेको थिइन। तर यहाँ हिउँबाट यात्रा तय गरे। ओस्लो सहरभरी घुमेर लिलाहम्मर सम्म पुगें। आधारातमा सुर्य देखिने देश आफैमा एक कौतुहल बनेको छ। । बिकास र प्रबिधि अनि प्रजातान्त्रीक देश नर्वे आफैमा एक अटल मानताबादी राष्टको मिठो अनुभुति भैरहेको छ मलाइ। यतिबेला पनि म तपाइकै अनुपस्थीतिको कटु पिंजडा महसुस गर्दै छु। तपाइकै अनुपम प्रेमको मिठो कवाफ खाँदै यात्रा तया गर्दैछु। तपाइ बिनाको यात्रा केवल निरस लागी रहे छ मलाइ। नर्वेको ३ हप्ते लामो यात्रा पछि फेरी म याहाबाट अमेरिका घुम्ने, टेक्ने सोच बनाएँ र म डेनमार्क तिर लागें र केही दिन पछि कोपनहेगन भएर अमेरिकातिर लागें।
भर्खरै चैत्र १५ २०५० गते म फेरी मिठा भावहरुमा डुब्दै अमेरिका तिर उडि रहेको छु। कल्पनामा र सपनामा जस्तो देखिन्छ अमेरिका त्यो मैले पनि महसुस गर्दै छु। अभाव खट्किएको छ तपाइको। सच्चा दिलमा जुन अभावले भाव जन्माउछ त्यो नै सत्य साहित्य हुँदो रहेछ भन्ने लागी रहेको छ। आफनो दैनिकी लेखिरहेको छु। तलतिर हेर्छु आकास नै देखिन्छ माथीतिर हेर्छु आकास नै देखिन्छ।
एउटा कल्पनाको सुन्यतालाइ चिर्दै म यथार्थको परिवेशमा ओर्लिदै छु। पटक पटक तपाइको फोटो हेर्छु र स्पर्शदायी आखाले धीत नमरे सम्म एउटा अज्ञात दिशामा टोलाइ रहन्छु।
स्वर्गहरुमा स्वर्ग जस्तो छ अमेरिका भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही भएर जिवित स्वर्ग हेर्नलाइ नर्वेबाट घुम्दै अमेरिकामै आइ रहेको छु। जीवनमा पहिलो पल्ट बाइस बर्षको उमेरमा कलिला सपनाहरु बुन्दै अमेरिकामा पाइला हाले। जन अफ केनेडी अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थलमा ओर्लिए। बाहिर हिउ नै हिउले ढाकिएको छ। न्युवर्क सहर आफैमा अजिव लागे पनि गहिरीएर अनुभव गर्न खोजिरहेको छु। सहर बाटोघाटो र बिकासको चरम सिमामा पुगेको अमेरिकाले मेरो मनमा नयाँ आभाष छर्न थाल्यो। म संयुक्त राष्टसंघको बिशाल भवनमा पुगें र त्यहाँ नेपाली संग सम्पर्क भयो। अन्तमा मिसन टु नेपाल हाउसमा पसें। बैकुन्ठ आचार्य सर, बिनोद बिष्ट सर भेटें र अन्तमा महामयिम राजदुत डा.जयराज आचार्यज्युलाइ भेटें। बिरानो ठाउमा पुगेर अलमल परेको बेला यस्तो ठाउ र त्यस्मा पनि आथित्यपुर्ण ब्याबहार पाउदा म खुशीले गदगद भएँ। राजदुत ज्युले नजीकै एक होटलमा राखी दिनु भो। त्यसै बेला डा. कुलचन्द्र गौतम ज्युसंग पनि भेटघाट भो। आपसमा सद्धभावपुर्ण भेटघाट र आत्मिय आतित्थेले संधैव मनमा जरो गाडेको छ। यस्तो बेलामा प्रिय गिताजी एक्लो हुदाको पिंजडा महसुस् गर्ने क्षमता म संग कति छ भन्ने कुरा अनुभव गर्दै छु। संग संगै यस सुन्दर अमेरिकाको काखमा लुटुपुटु गर्ने सपना कहिल्ये पुरा भएन। एक महिनाको बसाइ पछि म बसैबसको लामो यात्रा तय गर्दै क्यालिर्फोनीयको गोलडेन व्रिजमा तपाइसंगै यात्रा गर्ने रहर जाग्यो। लसएन्जलस सहर भरी घुमे एक्लै डेनभर नदीको किनारामा बसी बिछोडका हरफहरु कोरें। सच्चा प्रेमी प्रेममा कति सम्म पागल हुदो रहे छ भन्ने कुरा जीवनमा पहिलो पल्ट अनुभव गरिरहेको छु।
बसको लामो यात्रामा कोलोराडो हुदै रक्की माउन्टेनको पहाडहरुमा बैशाखी तान्दै यात्रा गर्दै छु। यी काला चटटानहरुमा तपाइको छाँया खोजी रहेछु। मेरा हरेक यात्रामा तपाइको माया खोजि रहेछु। घुम्दा घुम्दै बाल्टीमोरमा पुगेर नेपालीको माहोल पाए। त्यसमा डा.गोपाल श्रेष्ट र अचुत श्रेष्टदाइको भात्रित्वले अल्झाइ दियो। बुढीआमा मलाइ असाध्यै माया गर्नु हुन्थ्यो। आमासैगै महाभारत हेरेर दिनहरु बिताएँ। जिबन कति खेर समयको उर्जा हो भन्ने लाग्दो रहेछ भने कतिखेर बेकार।
आमाको मायाले मलाइ केही दिन आफनो घर बिर्सिएँ। त्यस पछि म भर्जिनियामा साहित्याकार होमनाथ सुबेदीदाइलाइ भेट्न पुगें। उहासंगै साहित्य र सेवाको अग्रगामी कदम चाल्ने अबसर मिल्यो। भर्खरै अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना भएको थियो र कार्यक्रममा समेत सहभागी भएर सृजनात्मक काममा हात हालें। सन १९९४ तिर हो। भर्जिनियको लामो बसाइ पछि म मिचिगन तिर गएँ। त्यहा पनि नेपाली मित्रहरु संग भेटघाट भो। अनि फेरी इन्डियानापोलीस हुदै मायमीतिर लागें। मायामी विचमा केही दिन रमाउदै गए। तर प्रिय गिताजी म साँच्चै हरेक अभाव भित्र तपाइकै भाव खोज्दै समुन्द्री छालहरुमा रमाए। समुन्द्रका छालहरुले तपाइका भावहरु बटुलेर मनको किनारमा चुमी रहयो। केही दिन पछि बहामाको नासु टापुमा एक महिना बिताएँ।
(दोस्रो भाग यहाँ छ)
Posted by: Dautari Admin Labels: संस्मरण/ नियात्रा
अनी तेसपची के भो त ब्रो ?
त्यस पछि को अंश १-२ दिनमा आउदैछ। अहिलेलाइ क्रमश।
वांहाले भने अनुसार यसमा वांहाको वर्लड् टुर सबै समेटिएको छ। तर कथा साच्चै हो की मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ त्यहो चांही भन्नुहोला है हस्त जी।
सार्वजनीक मानिस्हरु को नाम र लेखन शैली हेर्दा त आत्म कथा जस्तो नै छ नेपालीयन ब्रो
मैले पनि सत्य आत्म कथा जस्तै मानेको छु। तर कथा न हो, केटा केटी बनेर पनि लेख्न मिल्ने केटी केटो बनेर पनि लेख्न मिल्ने।
त्यसैले आफ्नो अन्यौल प्रश्तुत गरेको। हस्त जी कता मस्त हुनहुन्छ, समय मिले उत्तर दिनुहोला है?